Taliska Police-ka DKMG ah oo Digniin u diray Mulkiilayaasha Hoteelada Muqdisho – SBC
Taliska Police-ka DKMG ah oo Digniin u diray Mulkiilayaasha Hoteelada Muqdisho
Muqdisho- Taliska Ciidamada Police-ka DKMG ah ee Soomaaliya ayaa markale ku celiyay hadalkiisa ahaa in aan marnaba la ogolaan Karin kulamada xasaasiga ah ee aan Dowlada ogeyn islamarkaana lagu qabto Hotelada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magalada Muqdisho.
Waxa uu uga digay talisku mulkiilayaasha hotelada gaarka loo leeyahay in aan lagu qaban Karin kulamada aysan ogeyn waaxyaha amaanka, waaxuuna u sheegay in ay la soo xiriiraan mararka la qaban rabo kulamadaas si loo ogaado waxyaabaha looga hadlayo .
Shariif Sheequnaa Sh Maye taliyaha ciidamada Police-ka Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa u jeediyay digniinadaasi maamulayaasha Hoteelada isagoona ku booriyay in ay u hogaansamaan sharciga .
Arintani ayaa qeyb ka ah siyaasadaha isdiidan ee u dhexeeya labada gole ee DKMG ah iyo Madaxweynaha, waxaanu Police-ku ku howlan yahay ilaalinta kulamada lagu diidan yahay siyaasada Xukuumada DKMG ah ee uu madaxweynaha ka yahay Shariif Sh Axmed .
Sikastaba ha ahaatee arimahan ayaa waxay ku soo aadayaan xili shalay uu madaxweynaha DKMG ah ee Soomaaliya ku tilmaamay mid aan suuto gal aheyn in ay dowladiisu dhacdo bisha August ee sanadkan isagoona sheegay in dowlada KMG ah mudantahay in hal iyo laba sano midba ay mudantahay in loogu daro, iyadoo la eegayo xaalada uu dalku marayo.